सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको आम्दानी किन ह्वात्तै घट्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको आम्दानी किन ह्वात्तै घट्यो ?
पुस २५ गते, २०७५ - १२:५१
सियोल। सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सको अन्तिम चौमासिकमा नाफा २९ प्रतिशतले घटेको छ । विगत दुई वर्षयता कम्पनीको यो सबैभन्दा उच्च गिरावट हो । चिनीया स्मार्टफोन निर्माताहरुबाट सिर्जित बढ्दो प्रतिस्पर्धा र स्मार्टफोनको मूल्यमा भारी गिरावट आएका कारण सामसुङको नाफा घटेको बताइएको छ ।
पुस २५ गते, २०७५ - १२:५१ मा प्रकाशित